Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa tuubada biyaha kulul ee dhaqsaha badan? -Qasabadaha jikada, Qasadaha Buuxi Weelka, Qolka Musqusha | WOWOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa tuubada biyaha kulul ee degdega ah?
Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa tuubada biyaha kulul ee degdega ah?
2020 / 10 / 20 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7796 0
Qoysas badan si ay khariidada ugu fududaan u yeelaan, ayaa loo rakibi doonaa si loo hagaajiyo tuubada biyaha, laakiin ma ahan mid gebi ahaanba caan ah. Haddaba sidee ku saabsan qasabadda biyaha kulul ee degdegga ah? Sidee loo iibsadaa qasabad biyo kulul oo degdeg ah? Waa tan eeg
Tubbada biyaha kulul ee xawaaraha badan ma wanaagsan tahay?
Tubbada biyaha kulul waa baahida loo qabo biyo kulul, qasabada waxaa loo furi karaa labo ama seddex ilbiriqsi si dhaqso loogu helo biyo kulul, waa mid aad u dhakhso badan oo aad u haboon. Biyo-kulkan degdegga ah ee biyahooda kulul iyo biyo kale oo kulul marka la barbar dhigo tuubadan biyaha kulul ee degdega ah heer kulka biyaheedu aad buu u deggan yahay, isticmaalkeenna sidoo kale ma muuqdo marka heerkulka biyuhu yahay mid kulul oo qabow, biyo-ku-shubkan degdega ahi lagu rakibo guriga, ma fadhiyo boos, rakibidda iyo adeegsiga sidoo kale waa mid aad u fudud.
Astaamaha tubbada biyaha kulul isla markiiba.
1, tuubada biyaha kulul ee degdega ah sababta oo ah howsheeda kululaynta qabow waxay badali kartaa qasabada, oo sidoo kale loo yaqaan "qasabada korantada", waa nooc ka mid ah weel aan dahaaranayn ama wax yar dahaaran oo ku jira biyaha kululaynta aan caymiska lahayn, kaliya kaydinta ku meel gaarka ah ee biyaha kulul , iyadoo lagu xakameynayo aaladda heerkulka biyaha ee kululeeyaha biyaha korontada ku shaqeeya.
2, mabda'a korontada dhaqaalaysa mabda'a korantada, waa adeegsiga titanium-ga gaarka ah iyo qalabka kale ee magnet-ka ee u adkaysta wasakhda adag ee ka samaysan jajab, sidaa darteed biyaha ku jira birlabta birlabta ee sare ee ka hoosaysa tallaabada kuleylka kuleylka degdega ah. Tuubada sidoo kale waxay ku saleysnaan kartaa socodka si loo hagaajiyo awoodda, si loogu habboonaado xilliyada kala duwan ee heerkulka biyaha ee loo baahan yahay in la bixiyo.
3, qasabada koronto kululeeyaha degdega ah: 5 ilbidhiqsi si loo siiyo 30-60 digrii oo biyo kulul, taas oo ah, kuleylka furan, si loo buuxiyo heerarka sare ee dadka casriga ah, baahiyaha nolosha ee xawaaraha badan.
4, hawlgalka tuubada korantada waa fududahay: hawlgalka hal gacan ayaa xaqiijin kara biiladda socodka biyaha, korantada iyo deminta, hagaajinta heerkulka biyaha, nidaaminta biyaha, kuleylka iyo qabowga bilaashka ah.
Qasabada biyaha degdega ah ee qoyska woqooyiga faaiido weyn, waxay dabooli kartaa baahida degdegga ah ee looga baahan yahay biyaha kulul, ka dib iibsiga ayaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho dhibaatadee? Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa qasabadda?
Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa?
1, faham badan oo soo saarayaasha
Dareemida qiimaha hoose, badanaa dhageyso dadka qaar waxay ka hadlaan suuqa 50 yuan qiimaha hore ee warshadda qasabadda korantada degdegga ah, soo saarayaasha noocan oo kale ah hubaal maahan soo saare joogto ah, si loo hubiyo in soo-saarayaashu ay tahay inay ka faa'iideystaan ​​kiiska suuqa guud. , 30% ka hooseeya sicirkii hore ee warshadda, tayada asal ahaan wax dammaanad ah, waxaa lagu talinayaa in wax badan laga barto wax soo saarayaal yar, si fiican u aqoon suuqa guud.
2, garo 3C
Waa inuu jiraa caddeyn 3C ah, si loo xaqiijiyo, 3C waa shahaado qaran oo qasab ah, laakiin sidoo kale, shahaado qasab ah, marka lagu daro, in badan oo kale oo ah shahaado kala duwan sida waxyaabaha alaabooyinka lagu kalsoonaan karo, alaabada caanka ah iyo wixii la mid ah ay yihiin biyo, waa taas waxaad ku bixin kartaa lacag si aad u iibsato. Laakiin xitaa shahaadada 3C hadda iyaduna waa been abuur iyo been abuur, shahaadooyinkooda inta badan waa nuqullo mana laha asal.
3 、 Awood
Dacaayad-awood-hooseeya, muuqaalka muuqda waa awoodda sheyga loo yaqaan '800—1500W', oo loogu yeero waxa loogu yeero awood hoose si uu macaamiisha ugu jiido dabinka, warshaduhu way ogyihiin in tuubada korantada degdega ah ay tahay nooca kuleylka furan, ee nooca kaydinta biyaha, si loo hubiyo in biyo kulul, ugu yaraan 2000W awood, si waxtar u yeelato xilliga qaboobaha, illaa iyo inta awoodda ay ka yar tahay 2000W, asal ahaan waa khiyaano, illaa xilliga qaboobaha oo leh biyo kulul ma gaari doonaan saamayn!
Hore:: Miyaad ku dhiiran kartaa inaad ku iibsato qasabad saxanka musqusha wax ka yar $ 20? Next: Doorashada Qasabada Jikada Saxda ah
2021 / 02 / 04 3141
2021 / 02 / 03 3536
2021 / 02 / 03 3582
2021 / 01 / 28 2501
2021 / 01 / 28 1779
2021 / 01 / 28 2945